ကိုဗစ်ကနေ ကျန်းမာလာတဲ့အခါ ကိုယ်ခံအား ပြန်ပြည့်စေဖို့ - Hello Sayarwon
အခုလက်ရှိ မြန်မာနိုင်ငံမှာ အသေအပျောက်များတဲ့ ကိုဗစ်လှိုင်းကို ရင်ဆိုင်နေရပါတယ်။ ဒီကာလမှာ ကိုဗစ်ကြောင့် သေဆုံးသွားရသူတွေ ရှိသလို ကိုဗစ်ကနေ ပြန်လည် ကျန်းမာလာသူတွေလည်း ရှိပါတယ်။ ဒီတစ်ခေါက်တော့ ကိုဗစ်ကနေ ပြန်လည်ကျန်းမာလာတဲ့အခါ ကိုယ်ခံအား အမြန်ဆုံး ပြန်ပြည့်စေဖို့ ဘာတွေလုပ်ဆောင်ရမလဲဆိုတာကို ပြောပြပေးသွားပါမယ်။
ကိုဗစ်ကနေ ပြန်လည်ကျန်းမာလာပေမယ့် ရုတ်တရက် သေဆုံးမှုတွေကလည်း မနည်းပါဘူး။ ကိုဗစ်ကနေပြီးတောင် ပြန်ကောင်းလာတယ်။ အခုဆို ၂၁ ရက်တောင် ကျော်နေပြီ။ ဒီနေ့မှ ရုတ်တရက်ကြီး အကောင်းကြီးကနေ ဆုံးပါးသွားတယ်ဆိုတာမျိုးတွေက ကိုဗစ်ကနေ နာလန်ထလာချိန်မှာ လိုက်နာရမယ့် အချို့အချက်လေးတွေကို မလိုက်နာမိတာကြောင့် ဖြစ်ရတာပါ။ ရောဂါအခံ ရှိတာကြောင့်လည်း ပါတာပေါ့လေ။
ဒီလို နာလန်ထချိန်မှာ ရုတ်တရက် သေဆုံးမှုတွေ မဖြစ်စေဖို့အတွက် မဖြစ်မနေ ဂရုစိုက်ဖို့ လိုမယ့် တစ်ချက်က ကိုယ်ခံအားပြည့်ဝလာစေဖို့ ပါ။ ကိုယ်ခံအား ပြည့်ဝလာစေဖို့ ဆိုတဲ့အချက်ကလည်း အကြောင်းတရား များစွာအပေါ်မှာ မူတည်နေပါတယ်။
ကိုဗစ်ကနေ ပြန်လည်ကျန်းမာလာတဲ့အခါ ကိုယ်ခံအား အမြန်ဆုံး ပြန်ပြည့်စေဖို့ ဘာလုပ်ရမလဲ………..
ကိုဗစ်ကနေ ပြန်လည်ကျန်းမာလာတဲ့အခါ ကိုယ်ခံအား ပြည့်ဝစေဖို့ အတွက် လိုက်နာလုပ်ဆောင်ရမယ့် နည်းလမ်းတွေက ပုံသေ မရှိပါဘူး။ ဒီလိုပြောရတာက လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက် ခန္ဓာကိုယ် တုံ့ပြန်ပုံချင်း မတူသလို ကျန်းမာရေး အခြေအနေချင်းလည်း မတူပါဘူး။
ဒါပေမယ့် ကိုဗစ်ကနေ ပြန်လည် ကျန်းမာလာတဲ့အခါ ကိုယ်ခံအား ပြည့်ဝလာစေဖို့ လူတိုင်း မဖြစ်မနေ လိုက်လုပ်ရမယ့် ယေဘုယျ အချက်ကလေးတွေတော့ ရှိပါတယ်။ ဒါတွေက ဘာတွေများ ဖြစ်မလဲ…. အတူတူ ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်။
ကိုဗစ်ကနေ ပြန်လည်ကျန်းမာလာတဲ့အခါ ကိုယ်ခံအား ပြည့်ဝလာစေဖို့
ဒီတော့ ကိုဗစ်ကနေ ပြန်လည်ကျန်းမာလာတဲ့အခါ မတော်တဆ အခြေအနေတွေကို ရှောင်လွှဲနိုင်ဖို့အတွက် အခုပြောပြမယ့် အချက်လေးတွေကို လိုက်နာပေးဖို့ လိုပါမယ်။
ညတိုင်း အိပ်ချိန် ၇ နာရီ ကနေ ၈ နာရီ ပုံမှန် အိပ်ချိန် ရှိအောင် ဂရုစိုက်ပေးပါ။ လုံလောက်ပြည့်ဝတဲ့ အိပ်စက်ချိန် မရှိတာက ကိုယ်ခံအား ပြည့်ဝကျန်းမာစေဖို့ အနှောင့်အယှက် ဖြစ်ပါတယ်။
အိပ်ရေးပျက်တာ များလာတဲ့အခါ ဖျားနာတာ၊ နာလန်ထချိန် ပိုကြာတာမျိုးတွေဖြစ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ကိုဗစ်ကနေ ပြန်လည် ကျန်းမာလာချိန်မှာ တစ်နေ့ကို အိပ်ချိန် အနည်းဆုံး ၇ နာရီ ကနေ ၈ နာရီ ပုံမှန် ရှိအောင် ဂရုစိုက်ဖို့ လိုအပ်ပါမယ်။ ဒါမှ ကိုယ်ခံအားက ပုံမှန် အခြေအနေကို မြန်မြန် ရောက်ရှိမှာပါ။
နေ့စဉ် စားသုံးမှုမှာ ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အဆီဓာတ်၊ အမျှင်ဓာတ်၊ ပရိုတင်း၊ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်တို့ ပြည့်ဝမျှတစွာ ပါဝင်အောင် စားသုံးဖို့ လိုပါမယ်။ အမျှင်ဓာတ်က အူနံရံကို ကျန်းမာစေပြီး ကိုယ်ခံအား ပြည့်ဝစေဖို့ လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေကို အကောင်းဆုံး စုပ်ယူနိုင်စေဖို့ ထောက်ကူပေးမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
ကျန်းမာရေးနဲ့ ညီညွတ်တဲ့ အဆီဓာတ်ကတော့ ကိုယ်တွင်းက ရောင်ရမ်းမှုတွေကို သက်သာစေမှာပါ။ ကာဗိုဟိုက်ဒရိတ်ကတော့ အင်အား ဖြစ်စေပြီး အခြားသော ဗီတာမင် နဲ့ သတ္တုဓာတ်တွေက ကိုယ်ခံအားကို အကောင်းဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ပရိုတင်းကလည်း antibodies တွေကို ထွက်ရှိစေပြီး ကိုယ်ခံအားကို အထိရောက်ဆုံး အားဖြည့်ပေးနိုင်မှာပါ။
ဒါကြောင့် နေ့စဉ် စားသုံးမှုမှာ အသီးအရွက်၊ အမျိုးမျိုး၊ ပဲအမျိုးမျိုး၊ ကြက်သား၊ ငါး၊ နို့ စတာတွေကို ပါဝင်အောင် ပြင်ဆင်ပေးဖို့ လိုပါမယ်။
ကိုဗစ်ကနေ ပြန်လည် ကျန်းမာလာသူတွေ အနေနဲ့ တစ်နေ့ကို မနက်စာ၊ နေ့လယ်စာ၊ ညစာဆိုပြီး (၃) ကြိမ်ကိုတော့ မဖြစ်မနေ စားဖို့ လိုပါမယ်။ဒါ့ပြင် ကြားထဲမှာ နည်းနည်းနဲ့ ခဏခဏ စားပေးဖို့ လိုပါတယ်။
မဟုတ်ရင် အစာအိမ်က စားလိုက်တဲ့ အစားကို မချေဖျက်နိုင်တာမျိုး ဖြစ်ပြီး အစာမကြေတာ၊ လေပွတာ၊ အိပ်ပျော်ဖို့ ခက်တာမျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်လို့ပါ။
မစားဘဲနေပြန်တော့လည်း ခန္ဓာကိုယ်မှာ အင်အားပြည့်ဝဖို့ ခက်သွားတာမျိုးတွေ ဖြစ်စေနိုင်လို့ပါ။ အစားအစာတွေကို ရွေးချယ်တဲ့အခါမှာလည်း အားဖြစ်စေပြီး အစာကြေလွယ်တာမျိုးကို ရွေးချယ်ပေးပါ။
အရမ်းဆာမှ စားတာမျိုး မဖြစ်စေဖို့နဲ့ အစာမကြေတာမျိုး မဖြစ်စေဖို့ အစားစားချိန် တစ်ကြိမ်နဲ့တစ်ကြိမ်ကြားမှာ ၄ နာရီ အတိ ခြားပါ။
နေကောင်းလာပြီ မှန်ပေမယ့် ရောဂါကို ကာကွယ်ဖို့ရော၊ ကုသဖို့ရော၊ နာလန်ထလာချိန်မှာ ကျန်းမာစေဖို့အတွက်ပါ ဗီတာမင်တွေက အရေးပါတယ်ဆိုတာကို သတိရပါ။
ဒါကြောင့် နေကောင်းကျန်းမာလာပြီ ဆိုရင်လည်း ဗီတာမင်တွေကို ဆရာဝန်နဲ့ တိုင်ပင်ပြီး ဆက်လက် သောက်သုံးတာမျိုး လုပ်ပေးဖို့လိုပါမယ်။ ဥပမာ သံဓာတ်၊ ဗီတာမင် C၊ ဇင့်၊ ဗီတာမင် D တို့လို ဗီတာမင်တွေပါ။ အလွန်အကျွံ မဖြစ်စေဖို့တော့ သတိရပါ။
လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်ဆိုတဲ့နေရာမှာ ပင်ပင်ပန်းပန်း လေ့ကျင့်ခန်းမျိုးတွေ မဟုတ်ပါဘူး။ စိတ်ရောကိုယ်ပါ ကျန်းမာစေမယ့် တရားထိုင်တာမျိုး၊ အသက်ရှူလေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာမျိုးနဲ့ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လမ်းလျှောက်တာမျိုးတွေပါ။
ဒီလို လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်တာက ခန္ဓာကိုယ်မှာ ရောဂါတွေကို တိုက်ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ သွေးဖြူဥဆဲလ်တွေနဲ့ antibodies တွေကို ထွက်ရှိစေပါတယ်။ သွေးထဲမှာ သွေးဖြူဥဆဲလ်တွေနဲ့ antibodies တွေ များများ လည်ပတ်တာက မြန်မြန် ကျန်းမာလာစေဖို့ ထောက်ကူပေးနိုင်ပါတယ်။ တစ်နေ့ကို ပေါ့ပေါ့ပါးပါး လေ့ကျင့်ခန်း မိနစ် ၃၀ ကနေ မိနစ် ၆၀ လောက် လုပ်ပေးပါ။
နလန်ထချိန်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းတွေကို အလွန်အကျွံ မလုပ်ဖို့ ပြောပါရစေ။ တစ်နေ့ကို မိနစ် ၉၀ ထက် ပိုပြီး လေ့ကျင့်ခန်း လုပ်သူတွေဟာ ကျန်းမာနေချိန်မှာတောင် ဖျားနာနိုင်ခြေ များပါတယ်။ ဒါကြောင့် နလန်ထချိန်မှာ လေ့ကျင့်ခန်းကို အလွန်အကျွံ မလုပ်မိစေဖို့ ဂရုပြုပေးပါ။
ကိုဗစ်ကနေ ပြန်လည်ကျန်းမာလာတဲ့အခါ ကိုယ်ခံအား အမြန်ဆုံး ပြန်ပြည့်စေဖို့ အခုပြောပြခဲ့တဲ့ အချက်လေးတွေကို သေချာ ဂရုစိုက် လုပ်ပေးဖို့ အကြံပြုပါရစေ။
Recovering from Covid-19? Here’s how to quickly boost your immunity https://www.architecturaldigest.in/story/recovering-from-covid-19-heres-how-to-quickly-boost-your-immunity/ Accessed Date 10 August 2021
Coronavirus disease (COVID-19) pandemic https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019?gclid=CjwKCAjwpMOIBhBAEiwAy5M6YEkM7APtUC2vxHesahjgKKFNAozlALELAP8A9OKBhB6OZzCX198SRhoCcz0QAvD_BwE Accessed Date 10 August 2021